Madaxweyne Biixi Oo Dheeliga Saami Qaybsi ee Xukuumadiisa Kaga Galgashay Isku Xoqida Laba Beelood oo Walaalo Ah | Baligubadlemedia.com
Madaxweyne Biixi Oo Dheeliga Saami Qaybsi ee Xukuumadiisa Kaga Galgashay Isku Xoqida Laba Beelood oo Walaalo Ah
Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa jawaab lama filaan ah oo amakaag-gelisay dad badan kaga gal-gashay su’aal ku saabsanayd dheeliga ka jira saamiga ay beeluhu ku lee yihiin Xukuumaddiisa oo ay weydiisay Fadxiya Muuse Ibraahim oo ka tirsan Golaha Dhexe ee Xisbiga KULMIYE.
Fadxiya Muuse Ibraahim oo ka soo jeeda gobalka Togdheer, ayaa Madaxweyne Biixi ka codsatay sababta keentay in beesha ay ka soo jeedo uu qaban waayo qalinkiisu isla mar ahaantaana iyaga oo cod iyo taageera ba u huray ay u waayeen in uu u magacaabo xilalka dawladdiisa.
Fadxiya, ayaa hadalkan kaga dhawaaqdey fagaare ay xubnaha Golaha Dhexe ee KULMIYE su’aalo isla xisaabtan ah ku weydiinaayeen Madaxweynaha isla mar ahaantaana waxa ay badka soo dhigtay in beesha ay ka soo jeedaa aanay wax saami ah ka helin Xukuumadda uu ka taliyo iyada oo ka codsatay in uu keeno sababta uu beeshaas uu xilal ugu magacaabi waayey. Waxaana ka mid ahaa hadaladdeedii.
“Aniga magacaygu waa Fadxiya Muuse Ibraahim, waxa aan ka soo jeedaa beelaha dega gobalka Togdheer. Mudane Madaxweyne waxa aanu kaa codsanaynaa Wasiir ma lihin, Agaasime guud ma lihin, Dikreeto Madaxweyne na kumaanan soo bixin, daraadaana waxa aanu u sameynay si aad u soo baxdo adigu, markaa Mudane waxa aanu kaa codsanaynaa in sida ugu dhakhsaha badan aad adigu wasiir ama ku xigeen ama agaasime guud ba aad noo magacowdo.”. Fadxiya Muuse Ibraahim
Intaa ka dib, Madaxweyne Biixi oo isna dhankiisa isku dayey in uu ka jawaabo hadalkii Fadxiya, ayaa jawaabtii uu bixiyey ay u muuqatay mid aan munaasib ahayn, waxaaana uu Madaxweynahu arrintii hoostiisa taalay uu u riixay mid ka mid ah beelaha ay walaalaha yihiin beesha ay ka soo jeedo Fadxiya Ibraahim Muuse isla mar ahaantaana uu ku duray in ay yihiin qaar iyagu wax walba ka hororsadey beeshaasi.
Jawaabta Madaxweynahu bixiyey oo yaab gelisay dad badan oo ku xidhiidha baraha bulshada, ayaa waxa ay u badneyd sidan:-
“Inantaasi taladaa iyo tilmaantaa ay soo jeedisay waa ay fiican tahay, Fadxiya ma i maqlaysaa.?. Walaaleey Cabdalle Arab waa reer weyn oo miisaankiisa leh oo odey ii ah oo waxa weeye aan aad u jecel nahay laakiin waxa ay walaalo yihiin ku aan waxba reebayn oo aan waxba celinayn oo Celi la yidhaahdo, taana waan ka garaabayaa haddii Alle yidhaahdo.”. Ayuu yidhi Madaxweyne Biixi
Jawaabta Madaxweynaha, ayaa xifaltan siyaasaddeed ka dhex abuuri karta beelaha Arab ee walaalaha ah ee uu carrabka ku dhuftay, waxaana tani u muuqataa in Madaxweynahu uu dheeliga dhinaca saami-qeybsiga ah ee ka jira Xukuumaddiisa uu kaga gal-gashay maah-maahdii Soomaaliyeed oo odhan jirtay ‘Lafo Geri iyagaa la isku jebiyaa’.
Madaxweyne Biixi, ayaa inta badan la arkaa isaga oo meel kale iskaga riixaya dhalliilaha uu lee yahay ama ay galaan Madaxda Xukuumaddiisu, waxaana wakhtiyada qaar ay dadka siyaasiyiintu ku tilmaamaan in uu weli u dhaqmo shakhsi aan haynin hoggaanka sare ee talada dalka isla mar ahaantaana uu waxyaabo uu wax ka qaban karaayo iska riixo meelo aan khuseynin.